Hel gebi ahaanba bilaash nambarkan astaamaha ah ee la xiriira moodada | Abuurista khadka tooska ah
Thanks to shabakadda waxaan helnaa tiro wanaagsan oo bilaash ah oo noo oggolaanaya inaan bixinno shaqo qaabeyn tayo sare leh waxaan u qaban karnaa macaamiil kala duwan. Haddii aad waqti badan ku lumiso raadinta dhammaan noocyada astaamaha bilaashka ah, astaamaha ama sawirrada, waxaad ka heli kartaa tayo, laakiin curyaannimadu waa saacadaha lagu khasaaray.
Marka mararka qaarkood way fiicantahay in la qoro nooc ka mid ah degel ka kooban waxyaabaha noocan ah, ama lagu joojiyo khadadkayaga si loo soo dejiyo tan nooc gaar ah oo ah astaamo la xiriira adduunka moodada. Way ku habboon tahay in la daboolo dhammaan baahiyaha laga yaabo inaad ku haysato bartaada moodada ama shaqo gaar ah oo loogu talagalay macmiilka.
Wadar ahaan waa 37 calaamado ku saleysan midab fidsan iyo in ay leeyihiin midab midab leh oo si wanaagsan loo xushay waxa u noqon lahaa midab jilicsan oo jilicsan mararka qaarkood. Naqshadeynta waa mid fudud, laakiin xarrago leh isla waqti isku mid ah, sidaas darteed waxay ku yaalliin meel in ka badan oo xiiso leh si looga dhalo shaqooyinkaas taabashada weyn.
Qalabka aad soo dejisan karto waxaa ka mid ah astaamaha ku jira qaab EPS, AI, PNGs (1024 x 1024) iyo SVG. Xirmada ayaa ruqsad ka haysata qaybta loo yaqaan 'Creative Commons Attribution 3.0', markaa waad u isticmaali kartaa wax kasta oo aad rabto.
Kala xisaabtan naqshadaha funaanadaha, kabaha, jaakadaha, koofiyado, muraayado, koofiyado, silsilado, kabo isboorti, xirmo, funaanado iyo xitaa nigis. Markaa waa astaamo si dhammaystiran loo dhammaystiray oo ay la socoto naqshad la xushay si ay uga yaabsato macaamiisha naga filanaya waxa ugu fiican.
Dejinta astaamaha la xiriira dunida fashion waa xushmad ecomm.naqshad, degel aad aadi karto haddii aad ka heshay calaamadahaas oo aad rabto inaad ka hesho wax ka badan qaybo badan. Iyagu waa kuwo tayo sare leh, sidaa darteed hubaal waxaad ku noqon doontaa websaydhka markale.
Soo dejiso - Calaamada Icon Fashion
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Astaamaha » Ku hel qaabkan cajiibka ah ee astaamaha moodada si bilaash ah
Affinity wuxuu bilaabayaa tijaabooyin bilaash ah barnaamijyadeeda Photo iyo Designer-ka ee Windows